फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ की बाल कलाकार ‘मुन्नी’ कस्ती भईन् ? तस्वीरहरु हेर्नुहोस् « Lokpath
10 September, 2020 2:11 pm
फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ की बाल कलाकार ‘मुन्नी’ कस्ती भईन् ? तस्वीरहरु हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति : 10 September, 2020 2:11 pm
काठमाडौं – सन् २०१५ मा सुपरहिट भएको चलचित्र बजरंगी भाईजान तपाईले हेर्नुभएको थियो ? कबीर खानले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रले वाहवाही मात्रै कमाएको थिएन । भारत पाकिस्तान सीमा विवादका विषयमा केन्द्रित गरेर बनाईएको यो चलचित्रमा जीवन्त अभिनय गरेकी एउटी पात्र ‘मुन्नी’ लाई तपाईले पक्कै भुल्नु भएको छैन ।
हो, मुन्नीको भूमिकामा अभिनय गरेर दर्शकको मनमा बस्न सफल भएकी ‘मुन्नी’ अर्थात् उनै कलाकार हर्षाली मल्होत्रा कस्ती भईन् होला ? लोकपथ डटकमले उनको ईन्स्टाग्रामबाट केहि तस्वीरहरु लिएर यहाँ प्रस्तुत गरेको छ।
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री हिमांशी खुरानाले ३ दिन पहिला सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा आफूलाई
काठमाडौं । बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनले अंगदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। बुधवार उनले
सुशान्त आत्महत्या केसमा चरम लापरवाही, खुल्यो नयाँ रहस्य !
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले गत जून १४ मा बान्द्रास्थित आफ्नै
ड्रग्स तस्करीमा रिया र शोविक सहभागी भएको एनसीबीको खुलासा, १० वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने !
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु प्रकरणसँग जोडिएको ठड्रग्स केसमा पक्राउ
लकडाउनमा मुकेश अम्बानीले हरेक घण्टा कमाए ९० करोड !
एसिडमा कडा कानून : आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनले लेखिन् –…